Clara Peñalver kwuru. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede nke Sublimation | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ
Foto. Clara Peñalver kwuru. Facebook ibe.
Clara Penalver bụ onye edemede na onye ndụmọdụ okike. Akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya bụ Ndepụta ma dabere n'usoro izizi nke Akụkọ ifo. Malitere na Ọbara ma bụrụkwa onye mepụtara usoro Ada Levy -Otu esi egbu nymph, Egwuregwu ili ozu y Ọkpụkpụ Hourglass-. Na mgbakwunye, ọ na -edekwa umuaka akwukwo ma rụkọọ ọrụ na redio na telivishọn. Ana m ekele gị nke ukwuu ewepụtala ntakịrị oge gị ajụjụ ọnụ a, yana obiọma ya na nlebara anya ya.
Clara Peñalver - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Ndepụta Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị, nke pụtara dị ka usoro ọdịyo. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya na gbasara afọ ime ya n'ụdị a?
OGWU CLARA: Ndepụta bụ akụkọ na tara ahụhụ ọtụtụ njem ihu ọma tupu emezuo. Iji malite, amụrụ ya dịka ọdịnihu nke thriller na ọnwụ dị ka etiti na eri nkịtị. Na mbụ, enwere naanị otu akụkọ n'isi m, na -enweghị nhazi, yabụ mgbe enwere ike ide maka Akụkọ ifo, M kpebiri itinye ya na iwu nke usoro ọdịyo.
Ihe a niile dị n'etiti ngwụcha afọ 2018 na 2019. Mgbe m mechara bịanye aka na nkwekọrịta wee malite ịrụ ọrụ na akụkọ ahụ, 2020 bịara na ya, oria ojoo. Ndị oria ojoo manyere m ime ọtụtụ ihe mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme, ọkachasị gbasara ọrịa na -efe efe n'onwe ya. Akụkọ m dabere na nsonaazụ nje butere n'ụwa niile na, mgbe m na -ede ihe NdepụtaNa mberede, onye ọ bụla nọ na -aga n'ụzọ ọghọm na otu nje si agbasa, ka ọ na -esi site na ntiwapụ gaa na oria ojoo, yana ka mmadụ ga -esi mee mgbanwe n'ụzọ zuru oke, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ahụ. Ọ dị m ka onye iberibe na -agwa ndị na -ege ntị na ndị na -agụ akwụkwọ n'ọdịnihu ihe ga -amata nke ọma karịa ka m mere mgbe ebipụtara akụkọ ahụ, yabụ m mere mgbanwe.
Ewepụrụ m ihe niile metụtara mbufe nje, nke mmetụta mmetụta ya na ọkwa mmadụ. Nke ahụ mere ka ọtụtụ mkpụrụedemede ya too na ndị ọzọ pụtara ọhụrụ, nke, ihe gaara abụ nnukwu nsogbu maka akụkọ ihe mere eme, mechara bụrụ, mgbe ahụ, nnukwu ihe otiti ya. Akụkọ ka mma ugbu a.
Zip: Echetara m akwụkwọ mbụ m riri, a mmegharị site n'akwụkwọ akụkọ Agatha Christie Ogbugbu na Orient Express, nke Barco de Vapor deziri ma nwee ikike Ogbugbu na Canadian Express. Echetere m na eripịala akwụkwọ akụkọ ahụ, na m bi n'ime ibe ya ọ bụla, na site ebe ahụ, amalitere m iripịa akwụkwọ ọ bụla dabara n'aka m.
Banyere akụkọ mbụ m dere, ka anyị kwuo, atụmatụ akụkọ dị ogologo karịa (n'ihi na edeela m ọtụtụ ihe ọjọọ - jọrọ njọ - abụ na ọtụtụ akụkọ dị mkpirikpi), echetaghị m aha, mana ọ bụ kediegwu akụkọ gbasara nwa agbọghọ nke gara na mberede ụgbọelu ọzọ ebe ọ nọ na agha n'etiti alaeze na ... ọ dị mma, ihe dị oke egwu. Echere m na ọ bụ n'oge ahụ afọ iri na isii ya na ya ka ha nyere m nkwado obodo na asọmpi akụkọ obodo m. Nke ahụ bụ nke mbụ m nọ n'akwụkwọ akụkọ.
Zip: Eziokwu bụ na enwere m ọtụtụ ndị ode akwụkwọ, kedu ihe ọzọ, ha na -agbanwe dabere na akwụkwọ m hụrụ onwe m, na ọkwa ederede m na -ekwu.
Dịka ọmụmaatụ, na Ndepụta, Philip K. Dick na George Orwell bụ ndị ode akwụkwọ m. Ọ dị mma, ha abụọ na onye edemede nke N'oge okpomọkụ na nne m nwere anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Tatiana sibuleac, maka ụdị akụkọ ahụ bara ụba na agile nke na -egosi ahịrịokwu mgbe ahịrịokwu gasịrị. Enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ mbụ ya nke e bipụtara ebe a na Spain nke ukwuu nke na enweghị m ike inye aka kama ịkpọ ya n'onwe m Ndepụta.
Site na akwụkwọ akụkọ ugbu a, ndị na -ede akwụkwọ m bụ Martin Amis, Amelie Nothomb (Ana m alaghachikwute ya nke ukwuu, ọkachasị ya Metaphysics nke akpa) na Ernesto sabato.
Zip: Obi abụọ adịghị ya na onyenwe Ripley, nke nnukwu Patricia Onye ọkaibe. Enwere m mmasị na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uche m, mwepụ nke uche mmadụ, na Highsmith kacha mma na nke a.
Zip: N'oge a na -agụ mba.
N'oge m na -ede akwụkwọ, enwere m ọtụtụ ihe ntụrụndụ, site na were mkpuru -okwu m agha m ma ọ bụ ábụbà, ma ọ bụrụ na otu ụbọchị, ekweghị m ha nke ọma, ruo mgbe achọrọ m mee ka tebụl m dị ọcha nke ọma ọ bụrụ na ọ nọ n'ọfịs ebe m ga -arụ ọrụ. Ọzọkwa M ji aka dee, n'ime akwụkwọ ndetu Paperblanks ahọpụtara nke ọma maka akụkọ ọ bụla, nke nwere ike bụrụ ebe dị n'etiti omume mara mma na mania igwe.
Zip: Na usoro nke lear, ma ọ bụrụ na m ji akwụkwọ akwụkwọ, ọ na -amasị m ime ya n'elu ihe ndina ma ọ bụ n'ihe ndina; mgbe ụfọdụ nakwa na ụfọdụ cafeteria. Ọ bụrụ na m na -egwu egwu, ya bụ, ọ bụrụ na m na -ege akwụkwọ ọdịyo ma ọ bụ usoro ọdịyo, M na -eme ya ụbọchị niile, ka m na -elekọta nwa ọhụrụ m, ka m na -esi nri, mgbe m na -aga n'okporo ụzọ, ka m na -azụ ahịa. Na nkenke, n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'oge ọrụ ọ bụla anaghị achọ mgbali ọgụgụ isi. Nke pụtara na ọ bụrụ na enweghị m ike ịgụ akwụkwọ akụkọ abụọ na akwụkwọ n'otu ọnwa, na -ege ha ntị, enwere m ike iri akwụkwọ atọ ma ọ bụ anọ n'izu, ihe na -eme m ezigbo obi ụtọ, nke na -enyekwa m ohere ịnụ ụtọ akwụkwọ n'ụzọ dị iche.
Zip: N'ezie, a bụ m nri anụ ala akụkọ nke oge a. Agụrụ m naanị thriller ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ uwe ojii mgbe m na -edeghị na iji mee m obi ụtọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na -amụta ihe.
Zip: Ugbu a ka m mechara Invisible, na Paul auster, M na -aga ịbanye n'akwụkwọ akụkọ na -esote site n'otu onye edemede, Ịwụ elu nke na -egbu, bụ nke nwere nkọwa mkpụrụedemede. Mụ onwe m bụkwa mikpuru n'ime ide nke ọzọ m thriller, karịa n'ụdị akwụkwọ akụkọ Ada Levy karịa Olu Carol o Ndepụta, nke pụtara na ọ bụ a Thriller nke m na -emebi iwu niile nwere na inwe. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke m bu n'obi imecha, ma nyefee, n'ọnwa Septemba.
Zip: Ọ dị mma, echere m na ebe mbipụta akwụkwọ a bụ na -adọrọ mmasị karịa mgbe ọ bụla. na akuku Akwụkwọ ọdịnala egosila n'oge ọrịa na ka nwere ume ịga n'ihu, n'agbanyeghị na o doro anya na enwere mgbanwe na ọtụtụ mgbanwe n'oge. Ndị usoro ọhụụ n'ime ngalaba akwụkwọ, m na -ekwu maka ya audio, na -egosi anyị na ịgụ akwụkwọ a na ịnụ ụtọ akụkọ ifo abụghị naanị na ọ gwụbeghị, kama na -eme mkpọtụ.
Zip: Ka anyị hụ, agaghị m agwa gị na ọ dị nfe, emetụtala ọrụ m nke ukwuu, ọkachasị n'ihe omume m na -eme mgbe niile na -abụghị ide. Agbanyeghị, enwetala m ọtụtụ ihe ọma site na ọrịa ọjọọ, bido, nwa nwanyị na mmekọrịta dị oke ọnụ na onye mụ na ya na -emekọ ihe.
O nyekwaara m aka gbanwee usoro ihe m na -ebute ụzọ, na iduzi onwe m n'ebe ọrụ n'ebe ihe mgbaru ọsọ ndị na -eju afọ karị, adịghị mfe, kama ọ na -enye ume ọhụrụ na ihe na -atọ ụtọ karị. Nke pụtara na n'ezie Achọpụtara m ihe dị mma na ihe a niile. Ọ bụrụ na emeghị m ya, agara m akwụsị ịbụ onwe m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Clara Peñalver kwuru. Ajụjụ ọnụ na onye edemede nke Sublimation
Nieves Herrero: akwụkwọ